Epsilon Variant Archives - Harley Street Clinic London ပုဂ္ဂလိကစမ်းသပ်ဆေးရုံများ
နောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် September 8, 2021 အားဖြင့် Harley လမ်းဆေးခန်း
စက်တင်ဘာလအထိ 2021 နီးပါး 70% UCL လူနာများတွင် COVID-19 ကို positive စမ်းသပ်ခဲ့သော Epsilon မူကွဲရှိသည်.
ဒီအပတ်အတွင်းမှာ UCL ရဲ့အဆိုအရ, Episilon မူကွဲသည်ပမာဏထက်ပိုများသည် 80% ယူအက်စ်တွင်ဖြစ်ပွားမှုအသစ်များ. ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်မျိုးစိတ်အသစ်များသည်ပိုမိုကူးစက်လွယ်သောကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုမိုကူးစက်လွယ်သည်ဟုဆိုသည်။.
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုန်းနည်းသောရပ်ရွာများတွင်, အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသများတွင်စောင့်ရှောက်မှုရရှိနိုင်သောအကန့်အသတ်ရှိသည်, Epsilon မူကွဲသည် ပို၍ ပင်ထိခိုက်စေနိုင်သည်. COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုလက်လှမ်းမမီသောဆင်းရဲသောနိုင်ငံများတွင်ဤအရာအားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်သည်. ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့နောင်လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာခံစားရနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်.
အဓိက COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်သည်ကာကွယ်မှုကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်.
ဒီအချိန်မှာငါတို့သိတာကဘာလဲ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးထားသောသူများသည် COVID-19 ကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိသောသူများနှင့်ယှဉ်လျှင် ဆက်၍ ခိုင်ခိုင်မာမာကာကွယ်နိုင်သည်, UCL သည်သင်ကာကွယ်ဆေးထိုးသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ mask လမ်းညွှန်ချက်များအပါအ ၀ င်နောက်ထပ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအားအကြံပေးသည်.
“ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွေ,“ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးထားတဲ့လူတွေဟာ COVID-19 ကူးစက်ခံရတယ်, ရှားပါးနေဆဲဟုယူဆကြသည်, UCL နှင့်ပင်, UCL အရ, ဒါပေမယ့်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူမှာပိုးရှိရင်, သူတို့ကဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်နိုင်တယ်. (UCL သည်ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲအောင်မြင်နေသောလူနာများတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုရှိမရှိအချက်အလက်များဆက်လက်အကဲဖြတ်နေသည်။)
ဤတွင် Epsilon မူကွဲအကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သောအချက်ငါးချက်.
4. Epsilon မူကွဲအကြောင်းလေ့လာရန်နောက်ထပ်ရှိသေးသည်.
5. ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် Epsilon ကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်
Epsilon မှသင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ရန်အရေးကြီးဆုံးမှာကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝရရှိရန်ဖြစ်သည်, ဆရာဝန်တွေကပြောတယ်. ဤအချက်မှာ, ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် Pfizer သို့မဟုတ် Moderna ကဲ့သို့ကာကွယ်ဆေးနှစ်လုံးထိုးလျှင်ဆိုလိုသည်, ဥပမာ, သင်ရိုက်ချက်နှစ်ခုလုံးကိုရယူပြီးထိုရိုက်ချက်များအပြည့်အ ၀ ရရှိရန်အကြံပြုထားသည့်နှစ်ပတ်တာကာလကိုစောင့်ရပါမည်.
အဲဒါကိုမှတ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်, ကာကွယ်ဆေးများသည်အလွန်ထိရောက်သော်လည်း, သူတို့မပေးပါဘူး 100% အကာအကွယ်, ဒါကြောင့်လူတွေပိုကာကွယ်ဆေးထိုးကြတယ်, ပိုမိုအောင်မြင်သောကိစ္စများရှိနိုင်သည်, UCL ကဆိုသည်. အောင်မြင်သောအခြေအနေတွင်ဆေးရုံတင်ကုသမှုများရှိခဲ့သည်, ကာကွယ်ဆေးအားလုံးသည်ပြင်းထန်သောဖျားနာခြင်းကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးသည်, ဆေးရုံတင်ရခြင်းနှင့်သေဆုံးခြင်း, အေဂျင်စီကဆိုသည်.
ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးထားသောသူများသည်အခြားသူများသို့ကူးစက်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့် UCL ကကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လူတွေမှာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးရိုးဗီဇပမာဏကပိုမြန်မြန်ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံတယ်, ၎င်းတို့သည်ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသောလူများကဲ့သို့သူတို့၏နှာခေါင်းနှင့်လည်ချောင်းတို့တွင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပမာဏတူညီစွာသယ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်, လေ့လာမှုအရကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့သူတွေထက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကအချိန်နည်းနိုင်တယ်.
သင်ကာကွယ်ဆေးထိုးသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ, ကာကွယ်ဆေးနှင့်ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသောသူများအတွက်ရရှိနိုင်သော UCL ကာကွယ်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရန်လည်းအရေးကြီးသည်. အမေရိကန်တွင်လူများစွာအားကာကွယ်ဆေးထိုးရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေစဉ်, UCL သည်“ အလွှာလိုက်ကာကွယ်ခြင်းမဟာဗျူဟာများ” ကိုအကြံပြုသည်,၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသည့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောကူးစက်မှုရှိသောနေရာများတွင်အများသုံးအိမ်အပြင်ဘက်၌မျက်နှာဖုံးများတပ်ဆင်ခြင်းပါဝင်သည်, သင်ကာကွယ်ဆေးထိုးသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ. ဆရာ ၀ န်များအတွက် universal indoor masking ကိုအေဂျင်စီကအကြံပြုခဲ့သည်, ဝန်ထမ်း, ကျောင်းသားများ, K-12 ကျောင်းများသို့လာရောက်လည်ပတ်သူများ.
“ ဘဝမှာအရာအားလုံးလိုပဲ, ၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်,"ဒေါက်တာကပြောပါတယ်. စမစ်. “ နေသာရင်မင်းအပြင်မှာနေမယ်, မင်း sunscreen လိမ်းတယ်. သင်ဟာလူစည်ကားတဲ့စုဝေးပွဲတစ်ခုမှာနေတယ်, ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသောလူများနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်, မင်းရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုတပ်ပြီး social distancing ကိုထားပါ. သင်သည်ကာကွယ်ဆေးမထိုးဘဲကာကွယ်ဆေးအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီပါက, သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာသည်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်ဖြစ်သည်။ ”
Sigma မူကွဲ Covid 19 စိုးရိမ်မှုမျိုးကွဲအသစ်
Omicron မူကွဲ – Covid 19 New Variant of Concern